Ciidamada Itoobiya oo Maanta Isaga Baxay Deegaanka Ceel Cali ee Gobolkja Hiiraan iyo Shabaab oo la Wareegay (VIDEO) - Hablaha Media Network
Ciidamada Itoobiya oo Maanta Isaga Baxay Deegaanka Ceel Cali ee Gobolkja Hiiraan iyo Shabaab oo la Wareegay (VIDEO)
HMN:- Ciidamadii Itoobiyaanka iyo kuwa dowlada federaalka ee Soomaaliya ayaa saaka aroortiimisaga baxay degaanka Ceel Cali oo illaa 70km dhinaca galbeed kaga toosan magaalada Beled-weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Talaabadan ayey wararku sheegayaan iney ka dambeysay kadib markii xalay xoogaga Al-Shabaab ay madaafiic hoobiyeyaal ah ku garaaceen degaankaasi.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada saaka ka baxay degaanka Ceel Cali ay u jiheysteen dhinaca xadka gobolka Hiiraan uu la leeyahay dalka Itoobiya.
Ciidamada Itoobiya oo ay wehliyeen kuwo Soomaali ah ayaa muddo dheer degenaa degaanka deegaanka Ceel Cali oo ah goob istiraatiiji ah, mana cadda sababtii ay halkaasi uga baxeen iyo khasaaraha ka soo gaaray duqeyntii xalay loogu gaystay weerarkaasi.
Wararkii ugu dambeeyey oo ka imaanaya deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in xoogaga Al-shabaab ay la wareegeen gebi ahaanba degaanka Ceel-cali ee ay xalay ku duqeeyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya.